पशु अधिकारका पक्षमा- विविधा - कान्तिपुर समाचार
आश्विन १८, २०७६ उमा भण्डारी
काठमाडौँ — दृश्य १ : म कपन मिलनचोकको तरकारी बजारमा बस्छु । मेरो घरको पल्लोपट्टि ४ घरजति पर मासुपसल छ । त्यहाँ जिउँदो खसीबोका ल्याएर बाँधिएको हुन्छ । ती खसीबोका दिनैभरि, रातैभरिको धेरैजसो समय कराइरहेका हुन्छन् ।
साथी भएको बेला अलि चुप लाग्दारहेछन् क्यारे, एक्लै भए भने त ज्यान फालेर कराउँछन् । अफिस जाने बेलामा म ती खसीबोकाको हालत एकपटक हेरेर जान्छु । हरियो स्याउला त राखिदिएकै हुन्छ, तैपनि ती कराइरहेका हुन्छन् । थाहा छैन तिनले आफू हुर्किएको खोरबाट छुटेपछि कति दिन कति रात कराएर यहाँ आइपुगे, अनि अब कति दिन कति रात कराएपछि मर्न पाउने हुन् । यस्तो दृश्य देख्दा मेरो मन चुँडिएर आधी हुन्छ ।
दृश्य २ : मासुपसल छिचोल्ने बित्तिकै तरकारी बजार आउँछ । त्यहाँ ठूलै तरकारी बजार छ, जहाँ गोपीकृष्णदेखि फैका अनि महाकालसम्मका मान्छेहरू तरकारी किन्न आउँछन् । त्यो तरकारी बजारको छेउछाउमा अत्यन्तै कृषकाय, बाहिरैबाट करङ गन्न मिल्ने गाईका बाछा यताउता चहारिरहेका हुन्छन् । तिनको शरीर देख्दा यस्तो लाग्छ, तिनले जन्मिएपछि एक हप्ता पनि आमाको दूध चुस्न पाएनन् । सबै दूध कुम्ल्याउन पल्केको पशुपालकले उसलाई लगेर घाम र झरी, बर्खा र हिउँदको सकस काट्न छोडिदियो । ती बाछाहरू बेच्न राखेको सागपात तान्न जान्छन्, कहिले मिल्किएको वा कुहिएको पात पाउँछन्, नत्र भने पिटाइ मात्रै । उसले पिट्छ, उसले पिट्छ, तिनीहरू न मर्नसकेका छन्, न राम्रोसंँग बाँच्नसकेका छन् । सडकमा जथाभावी बसेका छन्, हिँडेका छन् । यी बाछाहरूको विजोक देख्दा लाग्छ, अघिका खसीबोका पो भाग्यमानी हुन् कि । आफन्तको विछोडले छटपटिनुपरे पनि काटिने बेलासम्म खाना त खान पाएका छन् ।
दृश्य ३ : तरकारी बजारकै आसपासमा कहिलेकाहीं देखिने अर्को दृश्य हो, जिउँदो कुखुराको खुट्टामा डोरीले बाँधेर उल्टो पारेर साइकल वा मोटरसाइकलमा राखेर दौडाउने । त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै म त्यो कुखुरा घिच्याउने व्यक्तिको अनुहारमा हेर्छु । मलाई त्यो जत्तिको दुःखी मान्छे कोही लाग्दैन, जसले जिउँदो जनावरलाई यति दुःख दिएर आफ्नो जीविका चलाउनपर्छ । मलाई किन हो किन संसारमा प्राणीमाथि योभन्दा क्रूर तवरको अर्को कुनै अत्याचार हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अनि बर्डफ्लु लागेका भनेर हजारौं जिउँदा कुखुरा खाल्टामा मिल्काएको दृश्य झल्झली सम्झन्छु । त्यसै रिँगटा लागेर आउला जस्तो हुन्छ । मलाई मात्रै त्यस्तो किन हुन्छ होला ?
दृश्य ४ ः आजभन्दा ३ महिनाअघि गोपीकृष्ण हलबाट धोवीखोलाको किनारै–किनार मैतीदेवीतिर जाँदा कालोपुल तरेपछि बाटोमा सानो कुकुरको छाउरो कुदेर आयो । सफा सडकमा मोटरसाइकलमा कुदिरहेको बेला अकस्मात आएको कुकुरको छाउरोलाई जोगाउन खोज्दा मोटरसाइकल चालक र उनका पछाडि बसेका व्यक्तिहरू पछारिए । पछाडि बस्ने महिला उछिट्टिएर सडक पेटीको धारमा घोप्टिन पुगिन् । उनको देब्रे घुँडा र पाखुरा नराम्रोसँंग ठोक्कियो ।
रुँदै र चिच्याउँदै गरेकी उनलाई पछिपछि आएको ट्याक्सीको ड्राइभरले काठमाडौं मोडल अस्पताल पुयाए । धन्न ती महिलाको हड्डी टुक्रा–टुक्रा भएनछ । ती महिला कोही नभएर म आफै थिएँ । अहिलेसम्म पनि मेरो घुँडा विसेक भएको छैन । खन्च्याङ–खन्च्याङ गरेर हिँड्नुपर्छ । छाडा कुकुरले वास्तवमै सवारी चालकलाई दिनु दुःख दिएका छन् । तिनले जथाभावी बाटो काटेर कहिले आफैं अकालमा मर्छन् वा घाइते हुन्छन्, कहिले सवारी चालकलाई घाइते बनाउँछन् ।
दृश्य ५ ः रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसको आसपास खसीबजारतिर जानुपर्छ, खसीबोका तानेको, घिच्याएको र नमान्दाखेरि पिटेको अति कारुणिक दृश्य देख्नुपर्छ । कतिपय खसीबोका त हेर्दा मोटाघाटा देखिन्छन्, कतिपय भने पिट्ने मान्छे जति दुब्लो छ, ती पनि त्यत्तिकै मरन्च्याँसे देखिन्छन् । मनमा खसीबोका र त्यसलाई डोर्‍याउने दुबैप्रति एकैपटक दया उम्रेर आउँछ । यस्तो लाग्छ, त्यो मान्छेको परिवार यिनै दुब्ला खसीबोकाको आम्दानीमा मात्रै बाँचेको छ । उसले यसो गरेन भने उसका छोराछोरी भोकै पर्छन् । यस्तो दृश्य देख्दा कुटाइ खाने खसीबोका र कुट्ने मान्छे दुबैप्रति सहानुभूति पलाउँछ । यति सोच्न मनलाग्छ, ती खसीबोकालाई एउटा राम्रो सवारी साधनमा राखेर ल्याएको भए दुबैले यति दुःख पाउँदैनथे ।
दृश्य ६ : केही साताअघि भीरबाट मिल्काइएका गाईहरू मरेका दृश्य देखाइयो । कताबाट कसले पठायो, कसले खसाल्यो, कसरी मारे भनेर निकै बहस चल्यो । त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । तराई क्षेत्रमा छाडा गाईवस्तुले अन्नबाली सखाप पारेको र खेतमै छाप्रो हालेर खबरदारी गर्नुपरेको समाचार पत्रपत्रिकामा आउने गरेको छ । कतिपय स्थानमा छाडा चौपाया अहिले परिवार तथा समाजको टाउको दुखाइ हुने गरेको छ ।
१. व्यवस्थित वधशालाको निर्माण : माथि उल्लेखित सबै दृश्य र घटनाहरूले नेपालमा पशु अधिकारको दुरवस्थाप्रति इंगित गर्छ । पशुवध मासु आपूर्तिको लागि आवश्यक भए पनि तिनको निर्ममतापूर्वक गरिने वधचाहिँ अक्षम्य छ । म बेलायतमा जाँदा मैले आफ्नी बेलायती साथीलाई सोधेको थिएँ, यी ठूलठूला ट्रकमा के राखेर कुदाएका हुन् ? उनको जवाफ वधशालातिर ओसारेका गाई वा भेडाहरू होलान् । सम्झेँ, म्यानचेस्टरबाट टाढाको ठाउँ रिचमन्ड जाँदा लाखौं भेडा एउटै चौरमा चरिरहेको देखेकी थिएँ, तिनको ओसारपसार यसरी हुँंदोरहेछ भनी थाहा पाएँ ।
अनि यहाँ मासुको लागि जनावर कसरी मारिन्छ भनी सोध्दा उनले भनेकी थिइन्, खासमा मलाई थाहा छैन, तर सकेसम्म कम पीडा दिएर मारिन्छ भन्नेचाहिँ थाहा छ । हुनसक्छ, तिखो छेड्ने वा काट्ने मेसिनले मारिन्छ । जिउँदो पशु मेसिनमा राखिदिएपछि सबै अंग छुट्टिएर प्याकेटमा बाहिर आउँछ । उनको जवाफले मलाई अलि शान्ति मिलेको थियो । हाम्रो देशमा दसैं चाड नजिकिँदैछ । हामी पशुबलिका हिमायतीहरू हिमाली तथा पहाडी भेगबाट हप्तौं खेदाएर ल्याइएका बोका तथा भेडाच्याङ्ग्रा जिउँदै घरसम्म पुयाएर त्यसको बलि दिएर धर्म हुन्छ, देवी खुसी हुन्छिन् भनी मान्छौं तर ती अबोध जनावरले खप्नुपर्ने शारीरिक तथा मानसिक कष्टको ख्याल गर्दैनौं । यति धेरै मासुको खपत हुने भएपछि देशका बिभिन्न स्थानमा आधुनिक वधशाला स्थापना गरेर मासुका प्याकेटमात्रै सहर पुर्‍याए पनि त हुँदो हो । महिनौं हिँडाएर हिमाली जिल्लाका च्याङ्ग्रा वा चितवनका कुखुरा काठमाडौं पुर्‍याउनुभन्दा त उतैतिर वधशालाको निर्माण गरेर प्याकेटको मासुचाहिँ काठमाडौं पुर्‍याए कसो होला ? जिउँदो जनावर घुमाउनुको सटट सफा र स्वस्थ मासु नै घुमाए हुन्न र ?
२.बलिप्रथामा सुधार : हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौं । हिजोका राजा–रजौटाको कालमा सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि राँगा वा बोकाको बलि दिनु स्वाभाविक थियो होला । तर अहिले तर अहिले यस्ता संस्कारको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । गुठीको जग्गा विघटन गर्न तम्सिने सरकारले यस्ता कुरामा पनि विचार–विमर्श गर्थ्यो कि ? पशुबलिका नाममा हामी धर्म गरिरहेका छौं कि पाप एकपटक चर्कै बहस उठाउनुपर्ने होइन ? अनि देश क्रिस्चियानीकरण भयो भनेर छटपटिने पण्डित महोदयहरूले पनि बलि संस्कारमा परिमार्जन गर्नपर्ने कुनै स्थान देख्छन् कि ? महिला तथा दलितलाई नियन्त्रण गरेर शासन गरेजस्तै अबोध जनावरमाथिको हिंसालाई स्वीकार्य बनाइराख्नमै उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित भएको देख्छन् भने त के भन्नु र खै ?
३.गौशाला निर्माण : छाडा गाईबाछा वास्तवमा बोझ होइनन्, यदि यिनको उचित रेखदेख गर्ने गौशालाको निर्माण भयो भने । गाईको मलमूत्रबाट मात्रै पनि लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ । मार्भिन ह्यारिसले इन्डियाका छाडा गाईगोरुको अध्ययन गरेर किन हिन्दुले गाई पूजा गर्छन् भनी अनुसन्धान गरेका थिए र उनको निष्कर्ष के थियो, छाडा गाईगोरुले गर्ने हानि–नोक्सानीभन्दा बढी फाइदा दिन्छन् । त्यसैले कृषिप्रधान हिन्दु समाजले गाईवस्तुलाई आमासरह मानेर संरक्षण गर्छ । तर अहिले कृषिप्रधानबाट रेमिटान्सप्रधान हुनलागेको हाम्रो मुलुकलाई छाडा चौपाया समस्या बन्नु अस्वाभाविक होइन् । यसको समाधान भनेको पशुको मालिकलाई जिम्मेवार बनाउनु र कथाचित सडकमा देखिएमा गौशालाको निर्माण गर्नु नै हो । यसतर्फ स्थानीय सरकार क्रियाशील हुनु आवश्यक छ ।
४.बन्ध्याकरण : भुस्याहा कुकुरको समाधान गर्न तिनको बन्ध्याकरण नै उपयुक्त समाधान होला । कुकुराश्रम पनि खोल्न सकिन्छ कि । खासमा भन्ने हो भने मानवको जस्तै जनावरको पनि जन्मदर्ता, इन्स्योरेन्स तथा मृत्युदर्ता गराउने परिपाटीको सुरुआत हुने हो भने ती जनावर सडकसम्म आइपुग्ने समस्यामा धेरै नै कमी आउँछ । विकसित देशहरूमा जनावरलाई परिवारको सदस्यजस्तै माया–ममता दिएर पालेको, औषधि–उपचार गरेको र मृत्यु संस्कार गरेको पनि देखिएको छ । उनहरूले गरेका राम्रा कामको फोटोकपी हामी पनि गरौं न । हामी पनि जनावरप्रति दयालु भाव राखौं र सभ्यताको परिचय दिऔं । प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०७:५५
काभ्रेमा विशेष सुरक्षा योजना
काभ्रे — दसैं, तिहार लगायतका चाडबाडलाई अपराधमुक्त, भयरहित बनाउन प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ । जिल्लामा हुन सक्ने चोरी, लुटपाट, डकैती, तस्करी, कालोबजारी, जुवातास, अवैध मदिराको कारोबार, सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले तयारी थालेको हो ।
‘कुनै पनि घटना नहोस् भन्नेमा सचेत छौँ, विशेष सक्रियता अपनाउने छौं,' जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी दीपक गिरीले भने, ‘प्रशासनिक काममा रहेका प्रहरीलाई समेत कार्यक्षेत्रमा खटाउछौं ।' गिरीका अनुसार, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, लामा दूरीका सवारीसाधनमा दुई जना चालक रहे नरहेको, बढी भाडा असुलेको विशेष निगरानी राख्ने छ ।
राजमार्ग तथा सहायक मार्ग सुरक्षा तथा त्यस क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटनाको लागि विभिन्न स्थानमा पिकेट स्थापना गरिने छ । ग्रामीण गस्ती, पैदल गस्ती बढाउनुका साथै गाडी तथा मोटरसाइकलमा मोबाइल टोली परिचालन हुने छन् । दर्शनार्थीको भीडभाड हुने पलाञ्चोक भगवती, चण्डेश्वरी मन्दिर, नाला भगवतीलगायतका मठमन्दिरमा प्रहरीले विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने छ ।
प्रकाशित : आश्विन १८, २०७६ ०७:५२
बीपी स्मृतिमा इतिहाससँग नयाँ संवाद
कुकुर पाल्न कर
कोरोनाको वास्तविक चुनौती अब !